FITSIDIHANA NY SERANANA VAOVAO ETO IVATO NATAON’IREO LEHIBEN’NY ETAMAZAORO AVY AO AMIN’NY MINISITERAN’NY FIAROVAM-PIRENENA - Ravinala Airports
FITSIDIHANA NY SERANANA VAOVAO ETO IVATO NATAON’IREO LEHIBEN’NY ETAMAZAORO AVY AO AMIN’NY MINISITERAN’NY FIAROVAM-PIRENENA
Tonga nitsidika ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eto Ivato, izay tantanan’ny orinasa Ravinala Airports, omaly 22 Jona 2020, ny Lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika, ny Jeneraly RABENAIVOARIVELO Jean Claude
niaraka tamin’ireo lehiben’ny Tafika isan-tokony, ny Jeneraly RAKOTONIAINA Jean- Aimé, Lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika an-Tanety, ny Jeneraly RADONA Ratiarivelo Ellis, Lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika
Anabakabaka, ary ny Capitaine de Vaisseau GA Jacquy Honoré, Lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika an-dRanomasina. Ny anton’izao fitsidihana izao dia ny hanamafisana sy hijerena ny fandrindrana ny filaminana sy ny fiarovana ity toerana ity amin’ny maha vavahadin’ny Madagasikara azy ka hitsinjovana ny ain’ireo olona hifamezivezy ao. Nandray ary nandrindra ny fitsidihan’ireto tompon’andraikitra eo anivon’ny Tafika Malagasy ireto ny Tale Jeneralin’ny Ravinala Airports, Andriamatoa Patrick COLLARD, Andriamatoa Jean
Dieudonné RANDRIANIRINAMIFIDIMANANTSOA, Kaomandin’ny seranam-piaramanidina Ivato, ary ny Jeneraly Iavizara RASOLONJATOVO Franck, mpanolontsaina mikasika ny fiarovana sy ny fandriampahalemana ato
amin’ny Ravinala Airports. Efa vita 100% ny asa fanamboarana.
Anisan’ny toerana manan-danja notsidihan’izy ireo ny efitra fandrindrana ny asa sy fanaraha-maso ny seranam-piaramanidina iray manontolo, na « Airport Operational Center Control (AOCC) », izay hanova ny fomba fiasa sy ny
fiarovana misy eto an-toerana. Mirefy 60m2 ity efitra ity ary misy olona miasa 24/24ora, 7/7andro. Avy ao avokoa no handrindrana ny asa rehetra eto amin’ny seranana, ny teknisiana misahana ny fikirakirana raha sendra misy tsy
fahatomombanana ara-teknika, ny filazana atao amin’ny fanamafisam-peo, ny tambajotra fanaraha-maso ny seranam-piaramanidina, ny fitsinjarana ny fitaovana rehetra izay ampiasaina ao amin’ny toerana fanoratana ny mpandeha, ny « passerelles » sns. Mifandray amin’ny efitranon’ny mpamonjy voina ao amin’ny ASECNA ihany koa ny AOCC izay manampy haingana amin’ny famonoana ny afo raha sanatria ka misy izany.
Tao aorian’io fitsidihana io dia nanao filatsahana tamin’ny alalan’ny elonaina teo amin’ny Tarmac ny Tafika Malagasy.